January | 2011 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
ပဋိပတ္တိ ရှုဒေါင့်အမြင် .. ..
Posted on January 29, 2011 by chitnge
ပဋိပတ္တိ ရှုဒေါင့်အမြင် .. .. ပဋိပတ္တိရှုဒေါင့်က တင်ပြချင်တာလေးတစ်ခု တင်ပြကြည့်ပါမယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ရှိပါတယ် .. .. ရှိကြောင်းကို ဘယ်သူသိသလဲ? ပေါ့နော် .. .. Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
Posted on January 28, 2011 by chitnge
တရားအားထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ ဒီခေတ်ကလက်တွေ့ခေတ်ပါ .. .. ဒီတော့ လက်တွေ့တရားအားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အားရှိစရာ သိပ်ကောင်းတယ်။ လက်တွေ့ ကျင့်မှလည်း အလုပ်ဖြစ်တာပါ၊ လက်တွေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါ လက်တွေ့ မကျင့်တုန်းက မတွေ့တာတွေ တွေ့လာရတာ သိလာရတာပေါ့ .. .. Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, လောကုတ္တရာ
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခေတ်ဆန်းပြီ .. ..
ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခေတ်ဆန်းပြီ .. .. အခုအချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်တွေ့ကျင့်ပြီးတော့ ပူဇော်ကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ်္ဂိုလ်တွေကို အားလုံးက ထောက်ခံကုန်ကြပြီ .. .. ပဋိပတ်္တိဆွေးနွေးပွဲတွေလည်း လုပ်ကုန်ကြပြီ။ ကိုယ်ဘယ်လိုကျင့်တဲ့ အခါ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း အမှန်အကန် သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ဆွေးနွေးကုန်ကြပြီ .. .. ဒီတော့ ကျင့်ကြံပြီးတဲ့နောက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ်္ဂိုလ်တွေကို No tags for this post.
နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ .. ..
နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ .. .. နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ဆိုတာကတော့ ယုံကြည်ချက်က တော်တော် အရေးကြီးပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ယုံကြည်ကျန်းမာ စိတ်ဖြောင့်စွာ ဆိုတာ စာရှိတာပဲ .. .. ယုံကြည်ကျန်းမာ စိတ်ဖြောင့်စွာ လွန်စွာ အားထုတ် ဆိုတာ .. .. ယုံကြည်ပြီး ကျန်းမာပြီး လွန်စွာအားထုတ်ရမယ့် သဘောပါပဲ။ နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေကတော့ အနုမာန မျက်မှန်းဆပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အရှိကို မှန်းဆပြီး ယုံကြပါတယ်။ မြင်ဖူးသကဲ့သို့ ယုံတာ မဟုတ်တောင်မှ မှန်းဆပြီး ယုံတာပေါ့နော်။ တကယ်တော့ … Continue reading →
ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းဟူသည် .. ..
ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းဟူသည် .. .. “မုန်းချစ်နှစ်တန် လူတို့ထံ အမှန်သဘော မရှိသောကြောင့်” ဓမ္မမိတ်ဆွေကြီး ဦးကျော်နှင့် အပေါင်းအပါများ .. .. မဂ်ဥာဏ် တည်ဆောက်တယ် ဆိုတာက စိတ်ကိုချေဖို့ပါပဲ။ စိတ်ကို ချေလို့ ကျေသွားရင် ကျေတာက နိဗ္ဗာန်တော့ မဟုတ်ဘူးနော် .. .. ဒါတော့ သတိထားရမယ်။ တချို့က စိတ်ကျေတာ နိဗ္ဗာန်ထင်နေတာ .. .. စိတ်ကျေသွားတဲ့ အခါကျတော့ ကျေအောင်ချေနိုင်တဲ့ မဂ်ကနေ ဖိုလ်ကူးပြီး ဖိုလ်ကနေမှ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုတာပါ။ ဒါလေးအရေးကြီးတယ် … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, သာသနာ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
သစ္စာသမားဆိုသည်မှာ .. ..
Posted on January 24, 2011 by chitnge
သစ္စာသမားဆိုသည်မှာ .. .. ကျွန်တော်က မြန်မာတစ်ဦးပါ .. .. ကျွန်တော်က မြန်မာကို ချစ်တယ် .. .. မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးကို စော်ကားပြစ်မှားတာမျိုးကျတော့ ကျွန်တော် မခံနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ဆရာဟာ ရဟန္တာမှန်း ကျွန်တော်အသိဆုံးပဲ။ ကျွန်တော့်ဆရာရဲ့ ဆရာကလည်း ရဟန္တာမှန်း ကျွန်တော် အသိဆုံးပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က သိသိကြီးနဲ့တော့ အစော်ကား မခံနိုင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရဟန္တာတွေပေါ်တယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှ မပေါ်နိုင်ဘူး .. .. မြန်မာနိုငံမှာပဲ ပေါ်တယ်။ ဒီတော့ ဒါကိုငဲ့ရမယ်။ ဘာသာ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, သာသနာ	| Leaveacomment
Posted on January 23, 2011 by chitnge
အသိပညာဆိုင်ရာ ထူးခြားချက်များ တစ်ချို့ကလည်း အသိပညာ ဖလှယ်တာကို သိပ်တက်ကြွတယ် ဒီခေတ်ဟာ အသိပညာ ဖလှယ်တဲ့ခေတ်ပါပဲ .. .. ကျွန်တော်တို့ကတော့ အရှေ့တိုင်းသားပီပီ လောကုတ္တရာ အသိပညာကို လိုက်တော့ လောကုတ္တရာ အသိပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ့်လိုင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ့။ လောကီအသိ ပညာကတော့ ပညာရှင်တွေ အမျိုးမျိုး ဖလှယ်နေကြတာပဲ။ လောကုတ္တရာ အသိပညာကတော့ ဖလှယ်ခဲတယ်။ သို့သော် စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလို့ လောကုတ္တရာ အသိပညာကို ဖလှယ်ပါတယ်။ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
Posted on January 22, 2011 by chitnge
အသိပညာအမှန်တရားကိုမြတ်နိုးလျှင် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို အနည်းငယ် အစီရင်ခံချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ သိပ္ပံပညာ ထွန်းကားတယ်။ အရမ်းကို ထွန်းကားပါတယ်။ ကမ္ဘာကိုလည်း သိပ္ပံပညာ လွှမ်းမိုးပါတယ်။ အရမ်းကို လွှမ်းမိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက သိပ္ပံပညာက ဘာသာရေးကို ပယ်တယ်။ ဘာသာရေးကိုပယ်တယ် ဆိုပြီးတော့ အဲဒီ ပယ်တဲ့ ဘာသာရေးထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထည့်ထားတယ်။ ဒါကတော့ သိပ္ပံပညာ လက်လှမ်းမမှီတဲ့ ကဏ္ဍတွေလို ဖြစ်နေတယ်။ အမှန်အကန်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မပယ်သင့်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အသိပညာကိုပေးတယ်။ သိပ္ပံပညာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း အသိပညာကို ရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, သာသနာ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
Dr Chit Nge on Facebook
Dear all, We are glad to inform you that Dr Chit Nge has opened Facebook Page. We will try to provide more information on both Dr Chit Nge’s Website and Facebook Page. Please send Feedbacks and suggestions on this new … Continue reading →
စွမ်းရည်မျှဝေခြင်းဆိုင်ရာ အချက်များ .. ..
စွမ်းရည်မျှဝေခြင်းဆိုင်ရာ အချက်များ .. .. ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ပရိသတ်ကို ကျွန်တော်ရထားတဲ့ စွမ်းရည်အကြောင်း နည်းနည်းပြောပြပြီးတဲ့နောက် စွမ်းရည်ကို မျှဝေဖို့အတွက် စတင်ပြီး ပဏာမကြိုးစား ကြည့်ချင်တယ် .. .. စွမ်းရည်ဆိုတာကို ခံယူတဲ့အခါ နည်းနည်းလေးတော့ အရေးကြီးတာတွေ ရှိတာပေါ့လေ .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် – ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့ မကြောင့်ကြနဲ့၊ ယုံကြည်ချက်မရှိစရာ အကြောင်းလည်း မရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော်က ဒီစွမ်းရည်ကို တကယ်ရထားတာပဲ – ကျွန်တော်က တကယ်ရထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က တကယ်ပေးမယ် ဆိုရင်လည်း၊ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, ပါရမီ	| Leaveacomment
သစ္စာရှာသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တည်ရာ သစ္စာတရားအကြောင်းသည် ပြန့်နှံစွာ နက်ရှိုင်းစွာနှင့် ကျယ်လောင်စွာ မပေါ်ထွန်းချေ .. .. တိုးတိုးညင်ညင်မျှသာ ပွင့်အံနေကြလေသည်။ ဤကား မြန်မာ့အခြေအနေနှင့် ကမ္ဘာ့အခြေအနေတို့ ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သည် သစ္စာရှာသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တည်ရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တွေ့ချင်းတွေ့လျှင် မြန်မာသည် သစ္စာတရားကို တွေ့နိုင်သည်။ ကမ္ဘာသည် သစ္စာတရားမှအပ အခြားသော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ လက်နှက်ကရိယာရေး၊ သိပ္ပံပညာရေးနှင့် အသုံးဆောင်ရေးတို့ကို စိတ်ဝင်စားသည် – ထို့ကြောင့် သူစိတ်ဝင်စားသောအရာ သူအောင်သည်။ မြန်မာသည်လည်း မြန်မာစိတ်ဝင်စားသောအရာ မြန်မာအောင်နေသည်သာ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး	| Leaveacomment
မြန်မာ့ဂုဏ် ၂ ….
Posted on January 21, 2011 by chitnge
မြန်မာ့ဂုဏ် ၂ …. သူတို့ စွမ်းဆောင်တာကလည်း တကယ်တမ်းကျတော့ သာသနာ ဘာသာ အကျိုးရှိစေတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် လည်း မဟုတ်ဘူး။ ရိုးသားတဲ့ မြန်မာတွေကို လှည့်စားပြီးတဲ့နောက် ခေတ်ပညာနဲ့ လှိမ့်လိုလှိမ့်၊ ခေတ်မှီ တိုးတက်တဲ့ ကိရိယာတွေ အသုံးချပြီး လှိမ့်လိုလှိမ့်နဲ့ မြန်မာတွေကို မြူဆွယ် ဖြားယောင်းပြီးတဲ့နောက် လမ်းလွှဲပို့ဆောင်နေကြတာ မြန်မာသစ္စာဖောက်တွေပဲ။ တကယ်လည်း ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတယ်.. .. ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရတာဟာ ပြောဖို့လိုအပ်လာလို့ ပြောရတာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုတောင်မှ တရားမ၀င်တဲ့စာနဲ့ အဓမ္မ၀ါဒီဆိုပြီး ထုတ်လွှင့်တယ်။ တရားမ၀င်ဘဲနဲ့ တရားဝင်သယောင်ယောင် လုပ်တာ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, သာသနာ	| 1 Comment
မြန်မာ့ဂုဏ် .. ..
မြန်မာ့ဂုဏ် .. .. ကျွန်တော်ကတော့ ဒီခေတ်လူတွေကို ယုံကြည်ကိုးစား မျှော်လင့်တဲ့သဘောပေါ့။ ဒါပေမယ့် အထူးအစီရင်ခံရမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာကို ကျွန်တော်တို့က ဂုဏ်ဖော်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာဘက်ကပဲ .. .. မြန်မာကို နှိမ်တာ မကြိုက်ဘူး – မြန်မာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က သစ္စာမြေမှာ ချက်ကြွေထားတဲ့ အမှန်တရားကို ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် လိုက်ခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့လူမျိုးတွေပဲ – စီးပွားရေး ဆိုတာကတော့ အခါအားလျော်စွာ နိမ့်ကျတယ် မြင့်တက်တယ်ဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်၊ ဒီအပေါ်ကြီးလည်း မှီခိုပြီးသတ်မှတ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ	| Leaveacomment